Umkhiqizi kanye noMphakeli waseChina Gallic Acid (Ibanga Lasezimbonini) | Sanjiang
Igama lomkhiqizo: I-Gallic acid (Ibanga lezimboni)
Igama Chemical: 3,4,5-Trihydroxybenzoic acid
Ifomula yokwakhiwa: C7H8O6 / 170.12 g / mol
Izici: Lo mkhiqizo uphuzi omhlophe noma omhlophe wamakristalu, oncibilika ezingxenyeni ezingama-85 zamanzi, izingxenye ezi-6 ze-ethanol, izingxenye ezimbili zamanzi abilayo, kanye ne-ether encibilikayo.
Ikhwalithi index: Umkhiqizo uhambisana nezindinganiso zase-Europe (ezingeni lokuqala), izindinganiso ze-JIS zikazwelonke (ezingeni lokuqala), i-US Pharmacopoeia edition 27, nemikhiqizo esezingeni eliphakeme.
Ukusetshenziswa / izindlela zokusebenzisa: Lo mkhiqizo usetshenziselwa kabanzi ezimbonini zemithi, udayi, amakhemikhali kanye ne-organic synthesis, kanye nokuhlaziywa kwezinsimbi ezingavamile.
Isitoreji: ubufakazi bomswakama, ubufakazi obukhanyayo, isitoreji esivaliwe
Ukupakisha: isikhwama sangaphakathi sepulasitiki eselukiwe, isisindo senetha esingu-25 kg
Ngokwesisekelo sohlobo, imakethe ye-Gallic Acid ihlukaniswe yaba ibanga le-Pharma, iBanga lokudla, iBanga lezimboni, iBanga Lombane. IPharma Grade ibusa iGallic Acid yomhlaba jikelele ngenxa yezicelo zeGallic Acid njengezinga lokunquma okuqukethwe kwe-phenolic kokuhlaziywa kumikhiqizo yezemithi. Ngaphezu kwalokho, njenge-antioxidant, i-Gallic acid ingavikela umzimba kuma-radicals mahhala kanye nomonakalo we-oxidative futhi izakhiwo ezilwa nokuvuvukala ze-Gallic acid zikwenza kube lusizo nakakhulu ngoba izifo eziningi zempilo zivela ekuvukeleni Lezi zenzo ezilwa nokuvuvukala zitholakale ziwusizo ngokumelene nokungezwani komzimba nakho.
1. Isetshenziswa njenge-ejenti ye-heingestatic ye-astringent neyangaphakathi kuhlelo lwe-urinary kwezokwelapha.
2. Isetshenziselwa ukwenza inki yokubhala inki eluhlaza okwesibhakabhaka.
3. Isetshenziswa njengosizo lokusebenzisa ekunyatheliseni nge-stencil nokuphrinta kwe-lithographic.
4. Lo mkhiqizo usetshenziswa njengosizo lokuthuthukisa izithombe.
5. Lo mkhiqizo ungasetshenziselwa isisombululo se-silver halide ezithombeni ukuze kutholakale ukuzinza kokugcina isikhathi eside futhi kuqede inkinga engacacile kokubi.
6. Lo mkhiqizo uyinto ebophayo yezinamathelisi ze-cyanoacrylate.
7. Isetshenziselwa amalungiselelo okushuka nokushuka izinwele.
8. Lo mkhiqizo usetshenziswa njenge-colloidal stabilizer ekukhiqizeni ama-siding.
9. Lo mkhiqizo usetshenziswa njenge-mordant ekukhiqizeni iphepha elinemibala kanye ne-fiberboard enemibala.
10. Ukungeza u-0.01-0.04% ngesisindo se-sesquitic acid kwifomula yegridi yokwakha esekwe ku-gypsum kungakhuphula amandla ayo.
11. Isetshenziswe njenge-reagent ehlaziyayo yama-alkaloid, izinsimbi kanye nama-acid angaphili.
Sula ngaphandle kokuguquguquka
I-600T / Y
Isikhwama Nokwelukiweyo, 25kg / isikhwama
Langaphambilini I-Gallic Acid Grade Ibanga Lombane)
I-China Gallic Acid
I-Industrial Grade Gallic Acid